Nagu saabsan | YingYee Mashiinka iyo Adeegga Teknolojiyada Co., Ltd.
YingYee Mashiinka iyo Adeegga Teknolojiyada Co., Ltd. wuxuu ku takhasusay qalabka habka birta. Waxaan diiradda saaraynaa suuqa caalamiga ah waxaanuna u hoggaansamaynaa xeerarka iyo xeerarka ganacsiga caalamiga ah si adag. Kooxdayadu waxay ku xoogan yihiin naqshadeynta, cilmi baarista, iibinta iyo u adeegsiga qalabka habka birta. Sumcaddeena iyo kalsoonideena ayaa adag, mahadnaq celinta macaamiisha iyo soo noqoshadooda ganacsi badan.
Waa masuuliyadeena inaan si wanaagsan ugu adeegno macaamiisheenna isla markaana aan u badbaadino baahidooda ganacsi. Waxaan hiigsaneynaa inaan u abuurno xaalad guuleysi leh dhammaan macaamiisheenna oo aan isku dayno sida ugu fiican ee aan uga fogaanno ugana baabi'inno arrimo kasta oo suurtagal ah. Wax soo saarka ka imanaya macaamiisheenna waxaa lagula dhaqmi doonaa waqtigooda si loogu qanco. Sumcaddeena adag iyo macaamiisha ku qanacsan waxay muujinayaan adeegyadeena wanaagsan. Waad tirin kartaa adeegyadayada sii socoshada iyo taageerada aad u fiican.
YingYee waxay siisay in ka badan 30 dal mashiinno ka shaqeeya habka birta, gaar ahaan Mareykanka iyo Koonfurta Ameerika. Mashiinadeenna iyo adeegyadeennu waxay ku raaxaystaan ​​jawaab celinno aad u fiican oo ka yimaada macaamiisha qanacsan ee dib noogu soo noqda iskaashiga muddada-dheer Xaqiiqdii, heerka iibka ayaa ka badan 80%.
Dhamaan mashiinada YingYee waxay kujiraan hal sano oo damaanad ah tan iyo markii ladiray, iyo waliba dayactir waara iyo taageero dayactir.